पहिलो को जंगल को बाहिर: यहाँ तपाईंले आफ्नो बच्चा संग घर मा, उहाँले आफ्नो ओछ्यानमा हँसिलो र धेरै कोमल मुस्कान मा झूट भएको थियो। एक नवजात को पहिलो महिना आफ्नो समय तल झूट को सबै भन्दा बिताउनुहुन्छ, तर 3-4 महिना देखि तिनीहरूलाई वरिपरि संसारमा एउटा सक्रिय चासो लिन सुरु हुन्छ। यो क्षण धेरै grudnichki पहिले नै कसरी flank अन गर्न जान्दछन्, राम्रो, बस प्रयास गर्दै गर्नेहरूलाई पहिलो आन्दोलन, अभिभावकको हेरविचार को आवश्यकता मा मास्टर। कसरी रोल वा क्रल सिक्न grudnichka बढी मोबाइल खेल समय आएको छ बुझ्न? त्यसैले, पहिलो कुरा पहिले।
बच्चाहरु को विकास प्रभावित कारक
धेरै युवा आमाहरु अन्य संग आफ्नो बच्चाहरु तुलना गर्न चाहनुहुन्छ; र साथीहरूले अझै आफ्नो बच्चा महारत छैन केही सीप सिकेका छन् भने, तिनीहरू धेरै चिन्ता वा तिनीहरूको बाल विकास मा पछि छ कि सोच्न थाल्छन्। तर, प्रत्येक बच्चा वृद्धि र समेकन आफ्नै व्यक्तिगत योजना, जीवन को पहिलो वर्ष मा शिशुहरू को चिकित्सा स्तर देखि थोडा फरक हुन सक्छ जो कि सम्झना।
बच्चा को सामान्य परिपक्वता धेरै कारक निर्भर: व्यक्तिगत शारीरिक डाटा, पोषण, मनोवैज्ञानिक अवस्थाको विधि, साथै बच्चाहरु को हेरविचार। धेरै मानिसहरू बच्चाहरु को स्वास्थ्य र वृद्धि बच्चालाई लागि उचित हेरविचार महत्त्व हल्कासित नलिनुहोस्, र बीच, यो निर्भर र।
रुचाउने, सुत्ने, स्नान, शैक्षिक खेल उमेर अनुसार, साथै व्यायाम र अभ्यास को एक किसिम: को नवजात को योग्य हेरविचार को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटक को एक जो निम्न अंक समावेश दिन, को एक विचारशील मोड छ। को मा जीवन को पहिलो महिना को नवजात घर मा सफाई र अर्डर निगरानी गर्न महत्त्वपूर्ण छ, यो एक सहज तापमान सेट अप गर्न, अनुकूल अवस्था अपार्टमेंट मा सिर्जना गर्न हल्ला स्रोतहरू हटाउन र जहाँ बच्चा सोता कोठा मा चिस्यान निगरानी आवश्यक छ।
तिनीहरूले पुरानो बढ्दै जाँदा बच्चा आमा उहाँले सहयोगको आवश्यक छ किनभने, उसलाई थप समय र प्रयास दिन आवश्यक छ। यो अवधिमा कसरी माथि रोल grudnichka, क्रल वा हिंड्न सिकाउन बारेमा perplexing प्रश्नहरू थुप्रै आमाबाबुले। तपाईं बच्चाहरु को विकास को लागि केहि प्रविधी लागू गर्न आवश्यक छ जब तपाईं थाहा छ भने यो त गाह्रो छ।
पहिलो छ महिनामा बाल विकास
यहाँ यो फिर्ता गर्न वा विपरित पेट देखि माथि रोल grudnichka सिकाउन समय छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन तपाईं लगभग आफ्नो बच्चाहरु को विकास र गठन पालन गर्न सक्छौं जो, साथै महिना द्वारा crumbs को साधारण स्वीकार मान्यता, एक पात्रो छ।
जीवनको पहिलो महिना - समायोजन एक बच्चा, अवधि, यो लगभग सबै समय सुत्ने, छ खुवाउने लागि मात्र उठ्दै।
आफ्नो फिर्ता र घाँटी मांसपेशीमा आफ्नो haggard स्तन दूध हरेक सास बलियो प्राप्त किनभने grudnichok, उनको टाउको राख्न सुरु दोस्रो महिना देखि।
3-4 महिना - बच्चा को "पुनरुद्धार" को एक अवधि, उहाँले धेरै सक्रिय थियो, ध्वनि बनाउन सुरु र उनको टाउको राख्न तपाईं पहिले नै बच्चा तयार सुरु गर्न सक्नुहुन्छ यस अवधिमा उहाँले एक कठिन सतह मा पेट पल्टिने गर्दा प्रयास थप जटिल कौशल गर्न (लेख कसरी grudnichka रोल र छिर्न) सिकाउन को विधिहरू छन्।
5 महिनामा grudnichok पहिले नै, माथि रोल गर्न सिकने वस्तुहरु पकड मा प्रगति, यो थप भावनात्मक हुन्छ।
बाट6महिना, बच्चा थप सक्रिय, उहाँले चुपचाप टाउको अप पेट मा झूट थियो विकास गर्न सुरु र खिलौने गर्न क्रल पहिलो प्रयास बनाउँछ।
कौशल छ महिना बच्चा
पहिलो छ महिना - सबैभन्दा मुश्किल यो अवधिमा बच्चा आधारभूत कुराहरू सिक्छन् किनभने। उहाँले पहिले नै थाह कति: परिवार थाहा छ, म आफ्नो नाम थाहा र कहिलेकाहीं यसलाई खिलौने र ध्वनि जवाफ otlikaetsya,, विचार र तिनीहरूलाई अध्ययन पहिलो भोजन प्रयास आफ्नो हातमा कुराहरू राख्छ एक लामो समय को लागि रोचक विषय लागि पुग्नु, अधिक रोल गर्न, र सक्षम छ उहाँले क्रल गर्ने प्रयास गरिएको छ। के आउँदै महिनामा हुन्छ?
यो बच्चा को 6th महिना पछि विकास
थुप्रै तरिकामा बच्चा भविष्य निर्धारण गर्ने बच्चा र आमा, जीवनमा अर्को रोचक चरण आउँछ। त्यसैले, कसरी बढ्न एक सानो मान्छे:
सबैभन्दा जिम्मेवार, आमाबाबुले बच्चा उपेक्षित, छोड्न हुँदैन उहाँले एक वास्तविक चटपटाउनु भएको छ किनभने - यो कि 7th र 8th महिना विश्वास छ! उहाँले कसरी रोल गर्न बस्न र खिलौने खेल्न थाह छ। र केही बच्चाहरु पहिले नै समर्थन पकड छन्।
10 औं महिना बच्चा9औं देखि निरंतर छ ढोंगी, खडा छ र चाल, फर्निचरहरू किनारा गर्ने समातेर।
धेरै burly 11 औं देखि 12 औं महिना गर्न अवधिमा आफ्नो पहिलो कदम लिन। यस समयमा, यो त्यहाँ तिनीहरूले चुक्छौं र गिर जब तिनीहरूलाई समर्थन गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
बच्चा एक तख्तापलट लागि तयार छ भनेर म कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ?
तपाईं पेट फिर्ता देखि रोल एउटा बच्चा सिकाउन अघि, उहाँले यसको लागि तयार छ भनेर पक्का गर्नुपर्छ। सबैभन्दा बच्चाहरु क्रांति उमेर पहिले नै4महिना पाकेको। यहाँ जो मुख्य विशेषताहरु एक आफ्नो बच्चाहरु आत्म-खोल्दै एक पक्ष बाट अन्य को कौशल गर्न तयार छ भने थाहा गर्न सक्नुहुन्छ।
उच्च वृद्धि र निर्धक्क भई टाउको धारण आफ्नो पेट मा झूट जब;
मोड र खुट्टा unbend गर्न सजिलो;
उहाँले आफ्नो छाती आफ्नो खुट्टा खींचती र ह्यान्डलहरू लो गर्ने प्रयास गर्दछ भने, यो पनि आफ्नो मांसपेशिहरु नयाँ सीप विकास गर्न पर्याप्त बलियो छन् भनेर भन्छन्।
तपाईं आफ्नो बच्चाहरु यी संकेत देख्न भने, त्यसपछि यसलाई गर्न पेट र विपरित देखि माथि रोल grudnichka सिकाउन समय। कसरी यसलाई अझ राम्रो र कुन विधिहरू प्रयोग गर्न गर्न जान्न, पढ्न।
grudnichka रोल सिक्न रूपमा? सुझाव र विशेषज्ञ सल्लाह
जब मासिक चिकित्सा चेक-अप, नियम, बच्चा, यसको विकास र भौतिक डाटा को समग्र अवस्थाको अनुमान दिन्छ। कुनै पनि ढिलाइ को खोज मा, को बाल विशेषज्ञ आमाबाबुले सूचित गर्न आवश्यक र निवारक प्रक्रियाहरु प्रदान गरिएको छ। हरेक आमा संसार र यसको सुविधाहरू बुझ्न कठिन प्रक्रिया उनको बच्चा मदत गर्न चाहनुहुन्छ, तर कारण ज्ञान वा मद्दत गर्न आफ्नो प्रयासको अनुभव कमी गर्न अप्रिय परिणाम निम्त्याउन सक्छ। पछाडिबाट grudnichka रोल सिकाउन वा उहाँलाई क्रल गर्न पेशेवरों को सिफारिसहरू पालन यदि जवान आमाबाबुको लागि, सजिलै हुनेछैन सिक्न मदत।
धेरै pediatricians विचारमा सहमत बच्चाहरु को विकास र विभिन्न सीप सिक्न आफ्नो क्षमता को सफलता धेरै हदसम्म तयारीको निर्भर छ। र यो प्रशिक्षण थियो अब, यो बच्चा छिटो नयाँ कुरा सिक्छन्। एक भन्दा प्रभावकारी प्रशिक्षण प्रविधी को - एक बच्चा मालिश र नियमित अभ्यास।
मालिश मांसपेशीमा बलियो grudnichka
मालिश मूल कुराहरु उपयोगी हरेक आमा जान्न। आखिर, तपाईं देख्न, र बच्चा र आमा बाहिर यो प्रक्रिया एक विशेषज्ञ आमन्त्रण गर्न हरेक दिन भन्दा सँगै पूरा गर्न धेरै nicer हुनेछ। सायद बच्चालाई अझै अपरिचित सामना गर्न accustomed छैन मालिश डाक्टर बाहिर छ भने, रुन, थाल्छन्। त्यसको विपरीत आमा संग: बच्चालाई सुरक्षित महसुस गर्नेछौं र, त्यसैले, जिम र मालिश प्रक्रिया उहाँलाई मात्र होइन लाभ, तर आनन्द छ!
कसरी मालिश को मद्दतले आफ्नो पछाडि माथि रोल grudnichka सिकाउन? मुख्य कुरा - नियमित छ, त्यसैले एक निर्धारित प्रक्रिया मिति सम्झना छैन: प्रयास गर्नुहोस्। त्यसैले, firming massazhik कसरी गर्न:
बच्चा पेट पट्टी र यो तल राख्नु, र त्यसपछि हल्कासित स्ट्रोक फिर्ता rubbed र 5-10 मिनेट।
को खुट्टा विशेष ध्यान: प्रत्येक खुट्टा र बाछो मांसपेशी अलग सानना।
त्यसपछि बिस्तारै संग पहिलो बिस्तारै राम्रो मोड को पेट अन्तर्गत बच्चालाई सम्हाल्न र त्यसपछि बैरल मा बच्चा पकड, र त्यसपछि फिर्ता राख्नु, उनको पछाडि बच्चा बारी एक ढिलो गति मा उत्प्रेरित गर्छ।
Pediatricians सिकाउन सक्षम दैनिक अभ्यास आफ्नो पेट मा अधिक रोल र फिर्ता फिर्ता गर्न grudnichka भन्ने विश्वास गर्छन्। अन्यथा सारा प्रक्रिया स्टोर मा तपाईं को लागि दुवै एक अप्रिय दृश्य छ, मालिश सुरु गर्नु अघि बनाउन आफ्नो बच्चाहरु राम्रो मुडमा पक्का: यहाँ एउटा सानो, अझै महत्वपूर्ण सल्लाह टुक्रा छ।
Philological विज्ञान। के philology अध्ययन छ? रूसी भाषाविद्
सना आफ्नै हात: कसरी बनाउने?
Rune Laguz: अर्थ व्याख्या
आधुनिक प्राकृतिक विज्ञानको आधारभूत प्रतिरूपको रूपमा ग्लोबल विकासवाद
मिश्र मा सबै भन्दा ठूलो मुर्ति - यो Sphinx। मिश्र को दन्त्यकथा। को Sphinx को इतिहास
बच्चाहरु र वयस्क लागि streptoderma घर उपचार
को जाडो लागि कुकिङ कोरियाली ककडी सलाद। र मात्र ...